? => Na2SO4 (sodium sulfate) | Isku-dheelitirka isla'egta Kiimikada
tat-ca = Na2SO4 | Isu dheellitirka Kiimikada
= sodium sulfate
Natiijooyinka 191 helay
Fal-galka yareynta-hawada Falcelinta laba-laabashada ah
2NaOH + CuSO4 → Cu (OH)2 + Na2SO4
sodium hydroxide naxaas (ii) sulfate naxaas (ii) hydroxide sulfate sodium
(xanh lam) (xanh lơ) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaOH (sodium hydroxide) ay kaga falceliso CuSO4 (ii) sulfate?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cu (OH) 2 (copper(ii) hydroxide) iyo Na2SO4 (sodium sulfate)?
Ku shub qaar ka mid ah dhibcaha xalka CuSO4 tuubada tijaabada ah ee 1 ml oo ah xalka NaOH
Dhacdada ka dib NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa CuSO4 (ii) sulfate
CuSO4 waxay la falgashaa NaOH waxayna abuuraan walax aan milmi karin oo naxaas ah (II) hydroxide
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CuSO4 (ii) sulfate
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CuSO4 (copper(ii) sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cu(OH)2 (copper(ii) sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu(OH)2 (naxaasta(ii) hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2SO4 (naxaas(ii) sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?
H2O + Na2CO3 + MgSO4 → Mg (OH)2 + Na2SO4 + CO2
biyaha kaarboon Sodium kaarboon magnesium sulfate sulfate sodium carbon dioxide
(lng) (lng) (lng) (rnn) (lng) (kh)
(xoog leh) (trung) (xoog leh) (trung) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + Na2CO3 + MgSO4 → Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2CO3 (sodium carbonate) ka falcelisa MgSO4 (magnesium sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Mg(OH) 2 () iyo Na2SO4 (sodium sulfate) iyo CO2 (carbon dioxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2CO3 (sodium carbonate) waxay la falgashaa MgSO4 (magnesium sulfate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + Na2CO3 + MgSO4 → Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Mg(OH)2 (magnesium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Mg(OH)2 () badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (magnesium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 + 2MAYA + 3CUSO4
copper acid sulfuric soodiyam amooniyam biyaha sulfate sodium nitrogen monoxide naxaas (ii) sulfate
(rnn) (digo yara) (rnn) (lng) (rnn) (kh)
(D) (xoog leh) (trung) (xoog leh) (trung) (xoog leh)
3 4 2 4 1 2 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 H 4H2O + Na2SO4 + 2MAYA + 3CUSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Cu (naxaasta) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa NaNO3 (sodium nitrate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo Na2SO4 (sodium sulfate) iyo NO (nitrogen monoxide) iyo CuSO4 (copper(ii) sulfate)?
Cu wuxuu la falgalaa H2SO4 / NaNO3
Dhacdada ka dib Cu (naxaas) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa NaNO3 (sodium nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 H 4H2O + Na2SO4 + 2MAYA + 3CUSO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaNO3 (sodium nitrate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaNO3 (sodium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaNO3 (sodium nitrate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (sodium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2SO4 (sodium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NO (sodium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MAYA (nitrogen monoxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CuSO4 (sodium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan badeecad ahaan?
acid sulfuric sodium hydroxide biyaha sulfate sodium
(dd) (dd) (lng) (dd)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide)?
NaOH waxay la falgashaa H2SO4
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaOH (sodium hydroxide), oo la waayo
NaOH waxay ku falcelisaa acide, iyadoo abuureysa milix iyo biyo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (sodium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2SO4 (sodium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?